Kusukela ezikhathini zasendulo abazingeli Ephakathi neseMpumalanga eSiberia babedingisiwe idume amakhono abo. Lokhu akusona isimanga, ngoba kulezi zindawo njalo vodilos eziningi izilwane, ukuzingela ku okuyinto ukuletha injabulo. Ngokuvumelana nalokho, kulezi zifunda ikhiqizwa futhi uboniswa izinhlobo ezingcono kakhulu izinja, okuyinto injongo yokuphila baba abazingeli isilo. Ikakhulukazi, kulapha lapho kwakukhona omunye abameleli zokuqala abazingeli ezinkulu - East Siberian Husky.
Kuyinto ephawulekayo ukuthi lo mshumayeli zohlobo oluthile inja namuhla ibhekwa njengempophoma eqondakala kakhulu kabi hhayi ezivame kangaka. Omele yokuqala yale inja emangalisayo isebenza ukuthi ezifuywa phakathi abomdabu laseSiberia. Noma kunjalo, ngenxa yalokhu East Siberian Husky libhekene izimfanelo okukhazimulayo ukusebenza mase kangakanani izingqinamba kunoma omele lomunye zohlobo ukuzingela. Ngaphezu kwalokho, lezi izinja avame ukusetshenziswa njengoba ukushayela uma udinga ukuletha ivolumu ezithile iphuzu elilodwa ukunikezwa futhi izingubo kwenye.
Siberian Husky bayakwazi ukubamba iqhaza ekuzingeleni like inyoni, futhi esilwaneni, futhi ezihlukahlukene zezinto eziphilayo yayo, inani eliphelele okuyinto 30. Nokho, jikelele akuyona ovamile phakathi izinja. Ngamanye amazwi, eMpumalanga Siberian Husky ihlukaniswe uboya futhi zverovuyu. Lokhu kungenxa ngokuyinhloko yokuthi isitayela abazingela izilwane ezahlukene ngokuphelele ezahlukene. Njengoba for imvuselelo ukuzingela izakhiwo zohlobo ke lolu daba kumele iqale ukubandakanya kusukela puppyhood. huskies Little ayaqala ukuqeqesha nge engu-izinyanga ezintathu, ukubadedela ukuzingelwa isilo ilungelo ephaketheni. Kuyaphawuleka ukuthi imizwelo engokwemvelo isilwane wasala-level omuhle, ngakho nomdlwana abasha kakhulu ngokushesha kakhulu emsebenzini, futhi lapho eseneminyaka e enezinyanga eziyisithupha osemdala, akuzona wawungaphansi abantu abadala. Izindleko izinja ukusebenza bathambekele ziyahlukahluka kuye lunye yabo isilo. I emikhulu isilwane, abazingeli inja siqeqeshelwe, ephakeme intengo emakethe yayo. Kungokufanayo uya for the imidlwane. Izingane okuholela kokuzalela abantu ababili abaye babhekana ngokuphumelelayo nokuphazamiseka esikhulu izilwane, amabhere noma nama-moose, izobiza ezibizayo okuningi kuka nozakwabo, abaqeqeshiwe yokuzingela, isibonelo, kwi amaprotheni.
Ngaphezu kwalokho, siphawula ukuthi isihloko inja omuhle kakhulu phakathi sebuningini umdlalo ukudlula noma iyiphi enye isixazululo zohlobo ezifana East Siberian Husky. Izithombe lalesi silwane yizicukuthwane kwasekuqaleni kusobala ukudwebela. Akumangalisi ukuthi abaningi balabo ongathanda abe umngane othembekile futhi umzingeli emangalisayo, makudle lokhu zohlobo. Siberian Husky, kuyo, okuyinto bekwi ukutshalwa ngokuvamile zingatholakala eSiberia angase abe ilungu egcwele umndeni, ngoba lokhu inja uvuka indlobane, nobungane izingane nezinye izilwane futhi njalo thokozani ukuxhumana nomuntu.
Nezinkophe evuvukele noma inhlekelele ekuseni
Ikhekhe "ePrague" izivakashi: iresiphi nazo zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Lens "Johnson Johnson" (Johnson & Johnson): incazelo, ukubuyekezwa
I amakati amahle kakhulu emhlabeni. Uhlu izinhlobo ngezithombe
Aurora: igama, ukubaluleka kanye nomthelela on isiphetho womnikazi wayo
"Harry Potter": njengesisekelo esinembile sokubalwa kwezikhathi films
Umphumela Stroboscopic - elenza isimangaliso sakhe
Uhlu Film 2015 novelties. Yini okusha Russian Cinema 2015: uhlu amabhayisikobho engcono